अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आउँदैछ यस्तो निमय « Light Nepal
अर्काको नामको सिमकार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छ ? हेर्नुहोस् आउँदैछ यस्तो निमय
Published On :4March, 2019 1:41 pm
काठमाडौं, २० फागुन । मोवाइल प्रयोग गरेर हुने अपराध रोक्न नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले नयाँ नियम ल्याउन लागेको छ । सरकारको आग्रह पछि दुरसंचारले यस्तो नियम ल्याउन लागेको हो । दुरसंचारको नयाँ नियम अनुसार अब अर्काको नाममा रहेको सिम प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
अरुको नाममा रहेको सिमकार्ड प्रयोग गरी अपराधिक कृयाकलाप बढेपछि दुरसंचारले यस्तो नियम ल्याउन लागेको जनाएको छ । ‘ई–केवाईसी सिस्टम’ को कार्यविधिमा प्राधिकरणले अर्काको नाममा रहेको सिमकार्ड प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो।
एउटै ब्यक्तिको नाममा धेरै सिमकार्ड प्रयोग हुने अवस्था समेत हुन नदिन प्राधिकरणले इ–केवाइसी सिस्टम ल्याउन लागेको हो । कार्यविधिमा एउटा व्यक्तिको नाममा कति सिमकार्ड लिन पाउन÷नपाउने भनी अहिले नै उल्लेख नभए पनि त्यसमा छलफल गरेर तोक्न सकिने दुरसञ्चारले जनाएको छ ।
नयाँ मात्र नभएर यो पुराना सिमकार्डमा पनि यो नियम लागू हुनेछ। पुरानो सिमकार्ड प्रयोगकर्ताले पनि आफ्नो सिमकार्ड पुनःदर्ता गर्नुपर्ने नियम ल्याइन लागेको छ ।